काँग्रेसकी निडर, इमान्दार महिला नेत्री अमृता सिंह - बडिमालिका खबर
काँग्रेसकी निडर, इमान्दार महिला नेत्री अमृता सिंह
राजनितिक फोहोरी खेल हो, राजनितिकमा लाग्नु हुदैन भन्ने तर्कवितर्क बेला बेला आइरहन्छन् । अझ राजनितिक नेतृत्वमा लाग्नेहरुको बेला बेला टिकाटिप्पणी आइरहन्छन् । बाजुरामा पनि राजनितिक क्षेत्रमा लाग्ने निकै संख्या छ ।
महिला संघ बाजुराकी अध्यक्ष अमृता सिंह पनि राजनितिक यात्रामा हुमिएकी एक योद्धा महिला हुन् । उनलाई चिन्नेले बाजुरा काँग्रेस महिला नेत्रीमा इमान्दार निडर लिडरका रुपमा चिन्ने गर्छन् । काँग्रेसको देउवा गुट अर्थात बाजुरामा देबराज जोशीको गुटमा परिचित भएपनि उनि पाटि र संगठनका हितका लागि इमान्दार कार्यक्रता रुपमा स्थापित भएकी छन् ।
धेरैको बिहे पछि राजनितिक यात्रा ढुङ्गिएका छन् । तर उनको भने बिहे पछि राजनितक यात्रा शुुरु भएको छ । नेपालि काँग्रेस बाजुराको महिला नेतृत्वमा सबै भन्दा इमान्दार र नेतृत्वमा हुनुपर्ने गुण भएको महिला नेताका रुपमा सिंह परिचित छन् । २०३३ साल असोजमा बुढिगंगा नगरपालिका ९ जुवापानी जन्मेकी अमृताको जिवन वाल्यकाल देखीनै मेलापातमा बित्यो । पढने उमेरमा उनि गाई गोरुको गोठालो लागिन् । उनी बाल्यकाल देखि बिभिन्न समस्या सँग लडिरहिन् र थुप्रै महिलाका समस्या, पिडा भोग्दै आईन् । तर पछिल्लो समय भने उनि काँग्रेस पाटिको भातृ संगठन महिला संघको नेतृत्व गरिरहेकी छन् ।
नेपाली काँग्रेसको अधिबेशन आइरहँदा बडिमालिका खबरले उनको राजनिति यात्रा र इमान्दारीतका बारेमा लेखेको छ । उनि अहिले महाधिबेशन प्रतिनिधि जाने तयारी गरिरहेकी छन् । अमृताको राजनितिक यात्रा निकै संघर्षपुणर् रहेको पाईन्छ । सामान्य साक्षर भएकि अमृता गोरु गोठालो देखि पाटिको जिल्ला तहको नेतृत्व सम्म पुगेकी छन् । उनि कुनै बेला गाँउमा मेलापाँत, घास, दाउरा, गोरु गोठालोमा उनको दिनचर्या बन्दै गएको थियो । तर अहिले उनि भने नेपालि काँग्रेस बाजुराको भातृ संगठन महिला संघ बाजुराको संगठन चलाइरहेकि छन् ।
अमृताले २०५६ सालमा उनले सदरमुकाम मार्तडीमा होटल ब्यबसाय गर्दै आएका डोटिका चक्र बहादुर सिंहसँग बिहे गरिन् । गाँउ बाट एकाएक सदरमुकाम मार्तडी प्रबेश गरेकि अमृतालाइ नयाँ ठाँउमा निकै संघर्ष गर्नुपर्ने बन्यो । होटलमा खाना पकाउने भाडा माभ्mनेमा केही समय त्यसैमा बित्यो । तर अमृतालाई मनमा लागिरहन्थ्यो, म कहिले अरुको जसरि अगाडि गएर बोल्न सक्छु, के नेतृत्व लिन सक्छु र ? तर अहिले अमृता नेपाली काँग्रेसका जिल्ला स्तरका नेता भन्छन्, इमान्दार, निष्ठवान र सबैलाई मिलाएर लैजाने क्षमतामा अमृताको रहेको बताँउछन् ।
पढलेख नभएकि अमृता अर्को गाँउको परिबेशमा हुर्केकी उनलाई सदरमुकाम मार्तडीमा स्थापित हुन निकै कठिन र चुनौति रहेको थियो । २०६० सालमा उनलाई तत्कालिन मार्तडी गाबिसमा महिला संघको कोषाअध्यक्षको जिम्मा दिइयो । त्यसपछि उनको राजनितिक यात्रा शुरु भयो । महिलालाई कोषाअध्यक्ष बनाउनु पर्ने भएकाले उनलाई नेपालि काँग्रेस कोषाअध्यक्ष दिएको थियो । कोषाअध्यक्षको जिम्मा पाईसकेपछि उनले राजनितिक सँगै समाज परिवर्तन अभियानमा सक्रिय बनिन् ।
अमृता भन्छन्, ती दिनहरु सम्झिदा अहिले पत्यार लाग्दैन । जतिबेला म गाँउघर मेलापात र गोठालो अनि समाजलाई उलटपुलट पार्ने सानो सपनाको त्यान्द्रो बोकेर एउटा यात्राको थालनी गर्दै थिए म । लाग्थ्यो हाम्रो पुर्खाको जीवन जसरी चलेको छ, त्यसरी नै हाम्रा जीवन पनि कुनै न कुनै बाहनामा चलि नै रहन्छ होला । म पनि त्यसरि चलाउछु सोचिरहेन्थे । तर, अचम्म लाग्छ के ती सबै मेरै जीवनले भोगेका हुन् ? यही जीवनले देखेका सपना हुन् ? के ती सपना केवल सपना मात्रै थिए ? प्रश्न उब्जन्छन मनमा कहिले काहिँ अमृता भन्छन् ।
आखिर आफुले गरेको काम प्रतिको सन्तुष्टी बाहेक अरु केही त हुँदोरैन छ । जीवन संघर्षबाट त्यही सिकेकी छु । कहिलेकाही मनमा प्रश्नहरु उब्जिराखे पनि मनमा कहिल्यै पछुतो लागेन आफू हिडेको यात्राको । अहिले लाग्छ म बाल्यकालमा किन बिद्यालय गएन भनेर तर पनि यहि ठाँउमा पुग्दा धेरै पाठ पढेको छु, यहि नै हो मेरो पढाइ अमृता भन्छन् ।
मलाई गोरु गोठालो लागेको कुनै पछुतो छैन्, अमृता भन्छन् । आज गर्व लाग्छ मैले त्यति बेलै आफूलाई एउटा गौरवपूणर् यात्रामा समाहित गरिछु । जीवन परिबर्तनका सपनाहरु देख्न लगाइछु । त्यो संयोग थियो वा आवश्यकता थियो वा बाध्यता तर मेरो जीवनमा ठोक्किन त ठोक्कियो । त्यसैले अहिले पनि गर्व लाग्छ म हिडेको त्यो बाटो, भोगेको त्‍यो जीवन, त्यहि संघर्षले पनि होला म अहिले एउटा पाटिको भातृसंगठन चलाइरहेको छु ।
अमृता गाँउले जिवन सम्झदै भन्छन्, साँच्चिकै ती दिनहरु रहरलाग्दा दिनहरु थिए । ती पलहरु अविस्मरणीय थिए । जीवन बाँच्नुको अर्थबोध भएको थियो । समयले सिकाएको हरेक व्यक्तिलाई आफू हुनुको अर्थ । आफ्नो अहम भूमिका । अनि समाजप्रतिको दायित्व । आज पनि ती क्षणहरु ताजै लाग्छन् । त्यहि आत्मासाथ गरेर मेरो राजनितिक यात्रामा अघि बढिरहेकी छ ।
अनौठो नमान्नु होला ती दिनहरु हामीले भोगेका वास्तविक दिन थिए । म जीवन यात्राका डोबहरु चलाएर आफ्नो जीवनलाई सुन्दर देखाउने सपनाहरुको भोको थिए । मेरा पैतलाहरु त्यही विरासत हुँदै गुज्रेर आए । सानो हुँदा बुनेका सपनाहरुले मलाई कहिल्यै निदाउन दिएनन । आज पनि त्यो जीवनका अनौठा तर चाखलाग्दा संघर्षका सुन्दर डोबहरुमा आफूलाई पाउँछु । अहिले पनि उस्तै मानिरहेकी छु । जीवन एक यात्रा हो, अझ त संघर्षको यात्रा हो । त्यही लागेर नै मैले त्यो यात्रालाई जीवनको सुरुवाती यात्रा मानेकी हुँ अमृताले वताईन् ।
उनि थप्छन् मैले समयसँग कहिल्यै गुनासो गरिन । यात्रामा आउने अनेकौ अवरोध, हण्डर ठक्कर सबै सहज लाग्थे । जीवनपद्धति नै बनेको थियो । समयसँगको लेखाजोखा गर्ने हाम्रो सोच नै थिएन । म समाज परिबर्तनको महान बाटोमा छु । अहिलेको राजनितिक यात्रा देशका लागि, परिवर्तनको लागि छ । समाजकै लागि भए पनि आफ्नो जीवन त्यो यात्रामा समर्पित गररहेकी छु ।
मैले हिडेका ती सुन्दर बाटाहरु आज पनि गौरवपुणर् छन् । मेरो यात्रा रोकिएको पटक्कै छैन । लक्ष्य प्राप्तिका लागि अनेकौ तयारी चलिरहेका छन । कुनै दिन यो संसारमा हामीले विजयको नारा लगाउनेछौ । म त्यो यात्राबाट अलिकति पनि बिचलित छैन । म संसार बदल्ने यात्रामा छु । मेरोे रोजाईको संसार प्राप्त नहुन्जेल यात्राबाट म विचलित हुने छैन, अमृता भन्छन् । अमृता पाटि संगठन निर्माण देखि सामाजिक काममा अग्र मोर्चामा लाग्ने गर्छन् ।